Hiigsiga Xisbiga WADDANI
Hiigsigayagu waa Jamhuuriyadda Somaliland oo ku waarta dal iyo dad midaysan, annaga oo sugnay qormada aanu ku leenahay adduunka, ahna qaran dhistay bulsho ku nool nabad, barwaaqo iyo dimuqraadiyad.
Wada-jir iyo dhabar- adayg, waxa aynu ku gaadhaynaa ictiraaf caalami ah. In ay dadka Jamhuuriyadda Somaliland aayahooda ka tashadaan, waa xaq ay leeyihiin oo aanay cidna u daba fadhiisanayn. Sidaa darteed, waxa hiigsigeenu ku salaysanyahay, labada hiigsi ee kala ah: doonista aan ka daalka lahayn ee ictiraafka caalamka iyo joogtaynta nabadda bulshada Jamhuuriyadda Somaliland.
Wada-jir, waxa aynu ku dhalin karnaa dhaqaale ay ku hodanto ummadda Jamhuuriyadda Somaliland. Mudnaanta kowaad waxa aanu siin doonaa shaqo-abuur iyo dakhliga dadka oo kora: waxa aanu kobcinaynaa korriinka dhaqaale si aynu shaqo- abuur dheeraad ah uga dhalino dhinacyada xoolaha, beeraha, kalluumaysiga, faleenka iyo macdantanta. Waxaa kale oo iyana aynu shaqooyin cusub ka dhalinaynaa dhinacyada kale ee dhaqaalaha sida: warshadaynta, isgaadhsiinta (ICT), maaliyadda iyo tamarta.
Wada-jir, waxa aynu ku dhalan-rogaynaa adeegyada caafimaadka iyo wax- barashada. Mudnaanta kowaad waxa aynu siinaynaa sidii saboolnimada loo yarayn lahaa: waxa aynu u samaynaynaa ummadda Jamhuuriyadda Somaliland daryeel caafimaad oo tayo leh, kaas oo la awoodi karo; Waxa aynu xoojinaynaa dhinaca caafimaadka hooyada iyo guud ahaan haweenka innaga oo ka duulayna, odhaahda, hooyo caafimaad-qabta ayuu ka dhashaa qaran caafimaad-qabaa; waxa aynu gaadhsiinaynaa ilma kasta oo Jamhuuriyadda Somaliland ah waxbarasho iyo biyo nadiif ah; waxa aynu ku hawlgelinaynaa dib-u-noolaynta iyo ilaalinta deegaanka, si dhaxal looga tago jiilalka soo socda.
Wada-jir, waxa aynu ku gaadhaynaa samaha nololeed ee bulsho, qoys iyo qofba. Mudnaan gaar ah waxa aynu siinaynaa la dagaalanka tahriibta: waxa aynu dhalinyarada ku hawgelinaynaa dhismaha dalka, iyada oo aynu abuurayno mashariic ah dhismaha kaabayaasha waaweyn ee dhaqaalaha, sida waddooyinka, madaarrada, dekeddaha, biyo-xidheennada iwm. Waxa aynu wax-ka-qabanaynaa dhibaatada guryo-la’aanta. Waxa aynu xakamaynaynaa saamaynta aafada "Jiilaalka” iyo abaaraha soo noqnoqda iyo ka haqab-beelka biyaha miyi iyo magaaloba.
Wada-jir, waxaynu ku samaynaynaa isbeddel mug-leh habka dawladdu u shaqayso, innaga oo awoodda uu dadku ku leeyahay kor u qaadayna. Waxaa mudnaanta kowaad leh in aynu xakamayno musuqmaasuqa iyo in laga baxo tamar-darrada wax-qabadka dawladda: waxa aynu dhisaynaa dawlad si daahfuran iyo si xil-kasnimo leh ugu adeegta dadka. Waxa aynu isbeddel tayeyn ah ku samayn doonaa shaqada dawladda dhexe iyo kuwa hooseba, si dadka aynu ugu adeegno hab dhega- nuglaan, qaddarin iyo caddaalad ah.
Wada-jir, waxa aynu ku sugaynaa sinnaanshaha buuxa ee muwaaddiniinta Jamhuuriyadda Somaliland, korriinka dheelli-tiran ee goballada dalka iyo saami- qaybsiga kuraasta iyo khayraadka dalka oo si caddaalad ah loo qaybsado.